नेपालमा इन्जिनियरिङ पढाइ एसियाकै अब्बल
नेपालमा पढ्ने विद्यार्थीको सैद्धान्तिक ज्ञानसँगै व्यावहारिक अभ्यास पनि उत्कृष्ट हुन्छ।
विद्यालयस्तरीय पढाइ सकिएपछि कलेजको खोजीमा भौतारिने अधिकांश नेपाली विद्यार्थीको चाहना विदेश जाने हुन्छ। परिवारको आर्थिक हैसियतअनुसार विश्वविद्यालय छनोट गर्ने तथा अभिभावकको चाहना पनि आफ्ना छोराछोरीले अब्बल कलेजमै पढून् भन्ने हुन्छ। हरेक वर्षको नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदा कुन कलेजमा पढ्ने, के पढ्ने, कति खर्चने र कसरी व्यवस्थापन मिलाउने भन्ने चटारो विद्यार्थी/अभिभावक दुवैको चिन्ताको विषय पनि हो। तर, इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य देख्ने विद्यार्थीका लागि नेपालकै पढाइ दक्षिण एसियाकै अब्बल छ भन्ने विषयमा कमैको मात्र ध्यान पुग्ने गरेको छ।
‘इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्न चाहनेविद्यार्थीको निम्ति सैद्धान्तिक ज्ञानदेखि व्यावहारिक अभ्याससम्मको ज्ञान नेपालमै राम्रो छ’, कान्तिपुर इन्टरनेसनल कलेजका निर्देशक प्रतापराज जोशी भन्छन्। उनका अनुसार अभिभावकको बुझाइ बाहिर पढेर आएको अवस्थामा मात्रै राम्रो भन्ने हुन्छ। नेपालमा गरिने अध्ययन र पढाइलाई राम्रोसँग नबुझी बाहिरै मात्र जान खोज्ने विद्यार्थीको जमात निकै ठूलो छ। छिमेकी मुलुक भारत होस् वा जुनसुकै अरू देशमा पुग्न विद्यार्थी लालायित हुने र अभिभावकको सोचाइ पनि बाहिर पढेको मात्रै राम्रो भन्ने छ। यसको तुलनामा नेपालकै इन्जिनियरिङको स्तर धेरै राम्रो भएको जोशीको बताउँछन्।
यहाँ पढ्ने विद्यार्थीको सैद्धान्तिक ज्ञानसँगै व्यावहारिक अभ्यास पनि यही हुन्छ। हामीले खोजेजस्तो शिक्षा र सोहीअनुसारको अभ्यास विदेशमा हुँदैन्। त्यसैले बाहिर पढेर आउनेलाई व्यावहारिक अभ्यास कम हुँदा यहाँ आएर के गर्ने के नगर्ने भन्ने समस्या धेरैमा पाइन्छ। अन्नपूण पोष्टमा समाचा छ ा
प्रधानमन्त्रीलाई गहिरो चोट ! ✍ नारायण पोख्रेल
शैक्षिक क्षेत्र चलायमान बन्न थाल्यो, त्रिविको निर्णय अर्को साता ✍ नारायण पोख्रेल
नेकपा भित्रको वाचा,बिबाद नगर्ने साथै अनुशासनमा कडाइ ✍ बिप्लब पोख्रेल
कुलमानको कार्यकाल आज सकिँदै, मुकेश काफ्ले उत्रिए मैदानमा ✍ बिप्लब पोख्रेल
पर्यटन क्षेत्रले गुणात्मक फड्को मार्ने मन्त्री भट्टराइको विश्वास
एकैदिन ६ जनाको मृत्यु
कोलकाताले ७ विकेटले हरायो हैदरावादलाई
सडकले निम्त्याएको विपद्, सरकारी बेवास्ताको शिकार
११ हजार कर्मचारी र शिक्षकले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण
हप्तामा २ दिन सार्वजनिक बिदा ?
एक हजार ४९७ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि, १७ जनाको निधन
टोखामा भूमिगत गरिएको बिजुलीको तार पड्कियो
ब्याजदर घटाउँदा बचतकर्ता मारमा
यात्रामा दोहोरो मापदण्ड : बसमा आधा मात्रै, विमानमा सिटभरि !